“Harry Maguire wuxuu qaadi karaa wadadii Virgil van Dijk” – Gool FM
(England) 13 Agoosto 2019. Ciyaaryahan Harry Maguire ayaa si rasmi ah ugu biiray suuqan xagaaga kooxda Manchester United, kaddib markii uu 80 milyan oo gini uga soo wareegay Leicester City.
Hadaba daafaca Leicester City ee Jonny Evans ayaa sheegay in saaxiibkiis hore ee Harry Maguire uu la jaan qaadi doono qaab ciyaareedka Manchester United, isla markaana uu kooxdiisa cusub la gaari karo guulihii uu Virgil van Dijk la gaaray Liverpool.
Jonny Evans ayaa saadaaliyay in Harry Maguire ay jecleysan doonaan taageerayaasha kooxdiisa cusub ee Manchester United.
“Wax walwal ah kama qabo sida ay noqon doonto xaaladiisa kooxda Manchester United, wuxuu la jaan qaadi doono qaabka ay u ciyaarto United-ka, waa talaabo weyn xirfadiisa kubadda cagta ah”.
Daafaca ugu qaalisan adduunka ee Harry Maguire ayaa ciyaaray kulan weyn, wuxuuna soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah, kaddib markii uu Manchester United ka badbaadiyay kubaddo badan ee halis ah, kulankii ay guusha kaga gaareen Chelsea 4-0.
Jonny Evans oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu intaas ku sii daray:
“Van Dijk iyo Maguire waxay ku wanaagsan yihiin ciyaarista kubbadda cagta, Harry wuxuu leeyahay xawaare badan oo dadka qaar aysan arki Karin”.
“Wuxuu kale uu ku xoogan yahay ciyaaraha hawada sare ah, qof walba ayaa isbar-bardhigi doona marka loo eego qiimaha ay ku dhaqaaqeen, laakiin way adag tahay in la qiimeeyo cadadka lagu bixiyay suuqa kala iibsiga ee haatan”.
RASMI: Xiddig hore Real Madrid iyo xulka Holand oo ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka fariistay ciyaarista kubadda cagta